Ny Masikoro dia foko malagasy any amin' ny morontsiraka atsimo-andrefan' i Madagasikara izay mivelona indrindra amin' ny fiompiana sy ny fambolena. Anisan' ireo vondrom-poko ao amin' ny tapany atsimo-andrefan' i Madagasikara ny Masikoro. Manakaiky ny Vezo izy nefa miavaka amin' izy ireo: hafa tsy tahaka ny an' ny Vezo ny fomba fiainany ary mifamatotra amin' ny Fanjakan' i Fiherenana ny tantarany.
Araka an' i Paul Ottino, ny anarana hoe Masikoro dia avy amin' ny teny banto tanzaniana hoe shokora, izay midika hoe "tavy", "hatsaka".
Tamin' ny taonjato faha-16 dia nisy vondon' olona maromaro mpiompy sy mpamboly izay niparitaka tamin' ny faritry ny tanety atsimo amin' i Madagasikara izay niforonan' ny Masikoro. Nitondra ireto anarana ireto ireo vondrona ireo: Ambolavaha, Antambaha, Antandavaka, Tambỳ, Temaro ary Tetembola. Tafapetraka ny fanjakan' ny Andrevola teo anelanelan' i Onilahy sy i Mangoky tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-17 izay nantsoina hoe Fanjakan' i Fiherenana taty aoriana. Olona samihafa faritra niaviana izy ireo nefa niara-nonina tamin' ny faritra iray. Niady tamin' ny Mahafaly, notarihin' ny mpajakan' ny Maroserana, ny fanjakan' ny Andrevola tao atsimon' i Onilahy. Tamin' ny taonjato faha-18 dia nikambana ireo fanjakana roa ireo hiatrehana ny fampitahoran' ny fanjakana bara avy ao atsinanana. Natosiky ny Bara miankadrefana hatrany amin' ny Lakandranon' i Môzambika ny Masikoro. Tamin' izany no nivakisan' ny fanjakana ho antoko efatra mpifanandrina. I Tompoemana, izay nonina tao Manombo, no mpanjaka masikoro farany.
Miisa any amin' ny 90 000 ny Masikoro tany amin' ny taona 2000 tany ho any. Mpiompy sy mpamboly ny Masikoro. Miompy omby sy ondry ary osy izy ireo. Mamboly katsaka sy mangahazo ary oviala (fakana tavolo). Talohan' ny fahaleovantenan' i Madagasikara dia nonina ambanivohitra ny Masikoro fa ankehitriny dia maro ireo izay monina an-drenibohitra, indrindra amn' ny vakin-tanàna sasany ao Toliara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Masikoro&oldid=1012563"
Voaova farany tamin'ny 2 Jolay 2021 amin'ny 15:24 ity pejy ity.